सौर्य एयरलायन्सले भाइटिकाको पर्सीपल्टदेखि विराटनगर–भैरहवा सीधा उडान गर्दै « Loktantrapost
सौर्य एयरलायन्सले भाइटिकाको पर्सीपल्टदेखि विराटनगर–भैरहवा सीधा उडान गर्दै
१८ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०७:५१
भद्रपुर, १८ कार्तिक । सौर्य एयरलायन्सले आगामी कात्तिक २२ गतेदेखि मुलुकको औद्योगिक तथा पर्यटकीय सहरको रुपमा प्रसिद्ध विराटनगर र भैरहवाबीच सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
एयरलायन्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक पोखरेलले आन्तरिक हवाइयात्रुको माग र मुलुकको पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्राथमिकताका कारण कम्पनीले ती दुई सहरबीच सीधा उडान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
विराटनगर प्रदेश नं. १ को राजधानी हो भने भैरहवा भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति भएको बुद्ध जन्मस्थल नजिकको सहर हो । यी सहरबीच यसअघि सीधा हवाई उडान थिएन ।
यी दुई सहरबीच हवाई यात्राका लागि ५३ मिनट लाग्ने र यसको दूरी २१५ नटिकल माइल रहेको एयरलायन्सका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।
विराटनगर र भैरहवाबीच हवाई उडान गर्ने पहिलो सौर्य एयरलायन्स भएको र यसबाट प्रदेश नं. १ र लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दा लाभान्वित हुने उनले बताए ।
लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्ध जन्मस्थलको भ्रमणमा वर्षेनी पूर्वी नेपालको काँकरभिट्टा र विराटनगरबाट हजारौं भारतीय, भूटानी र म्यानमारका पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । उनीहरु यसअघि हवाईमार्गबाट काठमाडौं पुगेर कम्तीमा तीन घण्टा पर्खेर फेरि अर्को जहाँजबाट भैरहवा पुग्ने गरेका थिए ।
“अब त्यो बाध्यता हट्यो, विदेशी पर्यटक र स्वदेशी यात्रुहरु सीधा उडानबाट भैरहवा पुग्न र त्यहाँबाट विराटनगर आउन सक्नुहुन्छ,” एयरलायन्सका अध्यक्ष पोखरेलले भने–“यात्रु महानुभावको समय र लागत दुबै बचत हुन्छ ।”
विगत आठ वर्षदेखि सौर्य एयरलायन्सले नेपालमा आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सीआरजे २०० जेट बिमान नेपालमा भित्र्याउने श्रेय पनि उसैलाई जान्छ । धेरै उचाईबाट उड्ने भएको हुँदा जेट विमानको यात्रा सस्तो, छिटो र सुरक्षित हुने उनको दावी छ ।
कम्पनीले निकट भविष्यमा नेपालगञ्ज र राजविराज विमानस्थलमा समेत उडान थप्ने जनाएको छ । हाल एयरलायन्ससँग ५० सिट क्षमताका तीन वटा जेट विमान छन् । जसमध्ये एउटा मर्मत सम्भारको अन्तिम चरणमा रहेको र दुई जहाज नियमित उडानको क्रममा रहेको छ ।
एयरलायन्सले अहिले काठमाडौंबाट विराटनगर, भद्रपुर, भैरहवा र धनगढीमा दोहोरो उडान गरिरहेको छ ।
चट्याङ लागेर हल्दिबारीका युवाको मृत्यु
मेचीनगर, २ जेठ । हल्दिबारी गाउँपालिका–२ का एक युवाको चट्याङ्ले लागेर मृत्यु भएको छ ।